Gilasy amin’ny voankazo
Terrine amin'ny akoho
Akora ilaina Toton-kenan-kisoa sy henan'omby 400g Atin'akoho 250g Tongolo efa notetehina manify Persily Sira sy dipoavatra Atody 1 Biscotte 2 Pâte brisée (araka izay ilaina amin'ny lasitra ampiasaina)
Paty fanamboarana « tacos »
Akora ilaina · Lafarinina 1kg 650 · Dobera 3 sf · Leviora 3 sk · Sira izay tiana · Rano 700g
Legioma amin’ny fraomazy
Akora ilaina · Ovy lehibe 6 · Menaka izay ilaina · Tongolo be 2 · Karaoty lehibe 8 · Poarao lehibe 2 · Haricot vert 1 tanana · Atody 2 · Fraomazy 100g · Sira sy dipoavatra
“Croquette de Chou-fleur”
Azo hanina manta na masaka ny chou-fleur. Tsy very mihitsy ity legioma ity fa na ny raviny aza dia azo atao lasopy. Ilay tahony iny, raha tetehina manify dia ampiarahina amin’ny salady ka hanina amin’ny saosy somary masiatsiaka.
Ity no « base » ho an’ny mofomamy miainga amin’ny “génoise” rehetra. Ho an’olona enina izy ity ary tokony lasitra ho an’olona enina ihany koa no ampiasaina mba ahazoana vokatra tsara.
Akora ilaina • Sucre glace 70g • Vovoka amandy 70g • Lafarinina 25g • Ronono 40 sl • Tapotsin’atody 5 • Siramamy 20g Ho an’ny krema • Tamenak’atody 5 • Siramamy 150g • Rano 30 sl • Dibera 150g
Akora ilaina (ho an’ny gilasy 1l) Voankazo 500g (izay tiana sy izay misy: frezy,papay...) “Sucre glace” 200g Ranom-boasarimakirana ½ Crème fraiche liquide 250ml na Ronono mandry tsy mamy 250ml
Omanina avokoa ireo voankazo. Hampangatsiahina ilay “crème liquide”. Ahodina ao anaty “mixeur” rehefa voakarakara ireo voankazo. Ampiarahina aminy ao ny voasarimakirana sy ny siramamy. Kapohina mba hiakatra tsara ny “crème liquide”. Rehefa vita izany vao atambatra amin’ireo voankazo nopotserina teo. Raha ronono mandry no nampiasaina dia rehefa voapotsitra ny voankazo dia afangaro aminy ary averina ahodina kely. Araraka ao anaty boaty plastika 1 litatra ireo ary ampidirina ao anaty vata fampangatsiahana, ao amin’ilay faritra mampivaingana sakafo mandritra ny ora 4 . Aroso miaraka amin’ny solila kely.